Soo dejisan Clownfish for Skype 4.56 – Vessoft
WindowsInternetkaInternetka kaleClownfish for Skype
Qeybta: Internetka kale
Bogga rasmiga ah: Clownfish for Skype
Clownfish for Skype – software ah si ay u turjumaan farriimaha qoraalka ah ee Rasuul caanka ah. software ka kooban turjubaanada in mas’uul ka ah tarjumaadda farriimaha soo socda iyo xilka ku qoran luuqadahan soo xulay waa. Clownfish for Skype taageertaa adeegyada turjumaada ka Google, Bing, Promt, Yandex, iwm software waxa uu leeyahay shaqo ah in la beddelo codka la saamaynta dhawaaqa kala duwan. Clownfish for Skype kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan boostada mass ee fariimaha iyo xirmaan robot chat ah si ay u jawaabaan fariimaha soo socda. Sidoo kale Clownfish for Skype waa inay awoodaan inay tiraa qoraalka ku qoran iyo diiwaan wadahadalkaas.
Tarjumidda oo ka mid ah farriimaha soo socda iyo xilka
boostada Mass farriimaha
Streaming diinta codka
Collection of salaan
Sirta ah ee fariimaha
Soo dejisan Clownfish for Skype
The software ugu caansan inay isgaadhsiin la yeeshaan saaxiibo oo caalamka ah. Software wuxuu hubinayaa tayo sare leh ee xidhiidhka codka iyo muuqaalka ah, iyo sidoo kale is dhaafsadeen haboon ee fariimaha qoraalka ah.
Software lagu wado oo lagu maareeyo xisaab badan Skype on hal computer. Software ayaa awood u si fudud u kala bedesho xisaabaadka iyo xiriiro dhowr ah CHAT waqti isku mid ah.
Amolto Call Recorder ee Skype – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu duubay hadalada maqalka iyo wicitaanka fiidiyowga ee Skype waqti aan xadidanayn iyada oo aan lumin tayo tayo leh. Softiweerku wuxuu taageeraa baaritaan deg deg ah oo wuxuu soo wacayaa taariikhda wicitaanka.
Faallo ku saabsan Clownfish for Skype
Clownfish for Skype Xirfadaha la xiriira
Adguard – softiweer si loo hubiyo joogitaan aamin ah oo internetka ah. Software-ka ayaa xannibaya mowjadaha xayeysiinta iyo goobaha khatarta ah.
Monster cookie – maamulaha cookies ee biraawsarka caanka ah. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu abuuro liistada cookies si looga hortago ka saaridooda.
Tool inay soo dejisan iyo baadhaan files warbaahinta. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi faylasha adeegyada caanka ah iyo soo saaro track maqal ah ka video.
Adeegga GPS – waa aalad lagu xakameeyo oo lagu socodsiiyo macluumaadka GPS-ka. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay qalabyo wax ku ool ah wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad xogta ku beddelato barnaamijyo ama aalado kale.
Eclipse – bey’ad ku habboon oo lagu horumarin karo isugeynta iyo softiweerka. Softiweerku wuxuu taageeraa luuqadaha barnaamijyada badankood taas oo u furi doonta fursadaha ballaaran ee soosaarka alaabada cusub.
Easeus Partition Master – barnaamij kumbuyuutareed ayaa maamusha qaybo disk-ga adag, qaybtooda ama midaynta, dhaqaajinta, hubinta, beddelka iyo dib u soo celinta.
Tani waa xal buuxa oo lagu sawirayo shaashadda iyada oo la adeegsanayo habab kala duwan oo wax ka beddeleysa sawirada muuqaalka ee tifaftiraha sawirada dhisay.